Guriga furan ee CACC – Taariikhda | WSDOT
homeagency projectsOnline open housesGuriga furan ee CACCTaariikhda
Guriga furan ee CACC – Taariikhda
Waxa aanu ogaanay in safmarku uu saamayn wayn ku yeeshay socdaalka cirka. Macluumaadka taariikhda hore iyo qaabayntu waxay muujinayaan in hoos u dhaca dalabka socdaalka cirku ay tahay kumeel gaadh, oo dalabku uu kordhi doono mudo kadib. Iyada oo laga duulayo dalabka iyo qaabaynta wakhtigan, dalabka duulimaadyada rakaabka iyo kaargooda ayay kordhi doonaan inta ay qaadaan mustaqbalka dhaw.
Maxaad u aragtaa?
Hadii lagu odhan lahaa kala dooro ikhtiyaarada soo socda, kee ayaad dooran lahayd?
In la dhiso madaar cusub ama in ka jira la gaadhsiiyo heer uu u buuxiyo baahida, taas oo u baahan maalgelin oo abuuraysa saamayn deegaan oo qaar. Sii wadida shaqada xarumaha madaarka wakhtigan; in aan la buuxin dalabka saadaashu waxa uu abuuri karaa dib u dhac jadwalka rakaabka iyo alaabaadka, fursado yar oo korniinka dhaqaal ah oo la xidhiidha waaxda gaadiidka cirka, iyo saamayn deegaan ee diyuuradaha sugaya inay fadhiistaan. In la dhiso awood cusub oo gaadiidka cirka ah si loo buuxiyo baahida la saadaalinayo, laakiin in kaliya sidaa la sameeyo hadii saamayn deegaan ee wasakhda hawada iyo codka duruuradaha aad hoos loogu dhigi karo. Maxaad sidaa u dareemeysaa?
Gudiga Isku Dubaridka Gaadiidka Cirka ee Ganacsiga ah (Commercial Aviation Coordinating Commission, CACC) oo waxay dhaqan geliyeen xeerarka lagu hagayo talooyinka Xeer Djinta. Fadlan muuji sida shakhsi ahaan ay xeerarkani kuugu muhiim yihiin.
Talooyinku waxay wax u taraan bulshada balaadhan. Gebi ahaan Waxoogaa muhiim ah In dhexe muhiim ah Aad muhiim u ah Aad iyo aad muhiim u ah
Talooyinku waa inay noqdaan kuwo dhaqaale ahaan macquul ah. Gebi ahaan Waxoogaa muhiim ah In dhexe muhiim ah Aad muhiim u ah Aad iyo aad muhiim u ah
Talooyinku waa inay deegaanka u wanaagsan yihiin. Gebi ahaan Waxoogaa muhiim ah In dhexe muhiim ah Aad muhiim u ah Aad iyo aad muhiim u ah
Talooyinku waa inayna saamayn xun ku yeelan bulshooyinka taariikhiyan laga sadbursaday. Gebi ahaan Waxoogaa muhiim ah In dhexe muhiim ah Aad muhiim u ah Aad iyo aad muhiim u ah